Alaabada Apple | Xogta IPhone (Bogga 5)
Barnaamijka beddelka cusub ee Apple Watch Series 2 iyo 3 ayaa kuu oggolaanaya inaad ku beddelato muraayadda dillaacsan ee moodooyinkan mid cusub oo bilaa kharash ah.
Cusboonaysiinta xigta ee Apple Music ee loogu talagalay Android waxay na siin doontaa iswaafajin lala yeesho Chromecast iyo helitaanka in ka badan 100.000 oo idaacado idaacadeed ah tan ugu weyn.
Xiaomi ayaa si macno leh u nuqul ka sameeysa barnaamijka Apple Watch barnaamijka 'Amazfit GTS'
Xiaomi casriga cusub, Amazfit GTS, wuxuu si badheedh ah u nuqulayaa qaybaha waaweyn ee aan ka heli karno Apple Watch Series 4
Apple TV + Si Loogu Soo Bandhigo Taxanaha Dickinson Bandhiga Filimka Tribeca
Apple wuxuu ku soo bandhigi doonaa taxanaha Dickinson Bandhiga Filimka Tribeca. Silsilad taxane ah oo la dhigay qarnigii XNUMXaad oo leh xusuusino kun sano ah.
Ragga ku jira Apple Music waxay sii daayaan liis cusub oo playlist ah oo adeegsanaya teknolojiyadda Shazam si loogu daro heeso mustaqbalka la garaaci doono.
Barnaamijka Subaxnimo ee Apple TV + ayaa ka miisaaniyad badan Ciyaaraha Carshiga
Miisaaniyadda xad dhaafka ah ee The Morning Show, Apple TV-ga cusub + ee taxanaha ah, ayaa la sifeeyey oo aad uga weyn yahay xilligii ugu dambeeyay ee Game of Thrones
Waxay noqon kartaa ama dhib kuma noqon karto shabakadda caalamiga ah, laakiin buugga 'Loogu talagalay Apple ee California' kama sii heli karo dukaanka internetka ee Mareykanka.
Soo-saaraha Shiinaha ee BOE ayaa ku jira mid ka mid ah shirkadaha bixiya bandhigyada OLED ee jiilka soo socda ee iPhone
Guddiga Dhaqaalaha ee Eurasia wuxuu xaqiijinayaa taxanaha Apple Watch 5
Waxay umuuqataa in Guddiga Dhaqaalaha Eurasia uu xaqiijinayo inaan yeelan doono Apple Watch Series 5 cusub bisha Sebtember
Qaar badan oo ka mid ah xargaha Apple ay bilo ka hor u sameysay Apple Watch, ayaa bilaabay inay muujiyaan keyd la'aan, sidaasna waxay ku xaqiijinayaan cusboonaysiinta qalabkan.
Apple TV + waxay taageeri doontaa soo dejinta dambe ee daawashada waxayna xadidi doontaa durdurrada isku mar ee aalado badan hal mar
Apple Music horeyba waxay ula jaanqaadi jirtay Alexa-ga Spain waxaanna ka dhagaysan karnaa adeegga muusikada ee Apple wixii Amazon Echo iyo Alexa ku hadla ah.
Apple waxay sheeganeysaa inay ka abuurtay in ka badan 300.000 shaqo South Korea
Apple waxay ku andacooneysaa inay in ka badan 300.000 oo shaqo ka abuurtay Kuuriyada Koonfureed, si toos ah iyo si dadban labadaba tan iyo markii ay soo caga dhigatay waddanka 20 sano ka hor
Apple waxay bilaabi kartaa dayrta laba nooc oo cusub oo Apple Watch ah oo ka samaysan dhoobada iyo titanium, marka lagu daro birta iyo aluminium
Kuo: Apple Watch taxanaha 5 waxay u badan tahay in la bilaabi doono bisha Sebtembar iyada oo leh shaashadda OLED ee ay bixiso Japan Display
Apple waxay sii deyneysaa teaser loogu talagalay Bandhigga Subaxnimo, mid ka mid ah taxanaha Apple TV + ee aan arki doonno deyrta
Apple wuxuu daabacaa teaser for Morning Show, taxanaha telefishanka subaxnimada iyadoo ay la socdaan Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, iyo Steve Carrel
Iyada oo ujeedadu tahay kor u qaadista tayada muusigga ku jira buuggeeda, Apple Music ayaa hadda soo saartay Apple Digital Masters cusub.
Daraasad kale oo la xiriirta caafimaadka iyo Apple. Ogaada waallida goor hore
Apple waxay leeyihiin wajiyo dhowr ah oo ku saabsan arrimaha caafimaadka iyo Apple Watch oo hadda daraasad ay shirkaddu ku samaysay in lagu ogaado waallida ayaa daadinaysa
Disney + waxay ku adkeyneysaa Netflix
Disney + waxay ku dhawaaqday xirmo ay ku jiraan adeeggeeda oo lagu daray ESPN + iyo Hulu oo ah $ 12,99. Waxay imaan doontaa Spain qeybta hore ee sanadka 2020.
Mar labaad Apple ayaa hogaamisa iibka smartwatch ee Q2
At Apple waxay sii wadaan inay noqdaan hogaamiyaasha iibka markay tahay smartwatch sida laga soo xigtay warbixinnada shirkadaha ka baxsan shirkadda.
Baadhitaanka dayrta ee Apple Watch wuxuu caawiyaa badbaadinta nolosha suuxdinta. Waxay si toos ah ula socodsiisay xaaladaha degdegga ah ee SOS iyo ninkeeda
Apple Music waxay rabtaa inaan soo helno muusig cusub "beddel" ah oo leh liiska 'ALT CTRL playlist', liiska cusub ee bilaabaya dhiirrigelinta HAIM.
Tim Cook wuxuu ka digayaa in Apple Pay ay lahaan doonto tiro aad u tiro badan oo isticmaaleyaal ah iyo macaamil ganacsi marka loo eego PayPal, oo ah tartameheeda ugu weyn ee macaamil ganacsi.
Apple Names DJ Khaled First Apple Music "Farshaxan Yahan Degenaansho"
Farshaxaniistaha iyo soo saaraha caanka ah DJ Khaled ayaa ku biiraya Cupertino oo ah Fanaankii ugu horeeyay ee Apple Music ee Deganaanshaha.
2020 Apple Watch waxay lahaan kartaa shaashadaha microLED
Shirkadda Cupertino ayaa sharad ku geli doonta shaashadda microLED ee sanadka soo socda ee Apple Watch. Xanta ayaa ugu yaraan tilmaamaysa.
Shaqada Walkie-Talkie ee Apple Watch waxay mar kale shaqeysaa ka dib markii la bilaabay daawashada watchOS 5.3
Shalay Apple waxay soo saartay watchOS 5.3 cusub, oo ah watchOS cusub oo dib noogu soo celinaysa shaqadii Walkie-Talkie kadib dhibaatooyinkii xagga amniga ee la helay.
Waxaan maqalnaa sheekada Paul oo 48 jir ah, mahadcelin ka timid ogeysiisyadiisa Apple Watch, wuxuu u tagay dhakhtarka wadnaha oo naftiisa badbaadiyey.
Sida looga masaxo xogtaada arjiga FaceApp
Waxaan ku tusineynaa ikhtiyaarka kaliya ee la heli karo si looga tirtiro xogtaada shaqsiyeed FaceApp ee aan maanta hayno. Maaha hawl fudud oo dhakhso leh, runtii.
Jiilka saddexaad ee AirPods ayaa imaan kara dabayaaqada sanadkan sida ay sheegeen falanqeeyayaasha. Apple waxna ma xaqiijinayaan mana diidayaan, sida had iyo jeer.
Haddii aad isticmaaleyso watchas betas, waa inaad ogaataa in beta-ka seddexaad uu hadda diyaar u yahay soo dejinta, beta loogu talagalay oo kaliya horumariyeyaasha.
Shirkadaha rikoodhada madaxabannaan ayaa labalaabay suuqooda iyada oo ay ugu wacan tahay qulqulka barnaamijyada muusikada
In kasta oo Apple Music ay noqotay badbaadiye la mooday in sumcado waaweyn lagu qoro magacyada iyo fannaaniinta markii ...
Waxaan u soo bandhigeynaa Lyd, oo ah barnaamijka lagu xakameynayo wax kasta oo nidaamka codka Sonos uu si toos ah noogu soo bandhigo Apple Watch.
Ku-dallaca wireless-ka ayaa ah jilaaha ugu dambeeyay ee lagu dhawaaqay AirPods
Apple waxay soosaartay xayeysiis cusub oo ay ku muujineyso kala duwanaanta lacag-bixinta wireless-ka ah marka lagu daro ku faanista shey wareega ah oo loo isticmaalo maalin-maalin.
Apple waxay rabtaa inaan iska ilowno IPhone-ka markaan isboorti la sameyno Apple Watch, tan darteed waxay ku hagaajinayaan barnaamijka Waxqabadka leh watchOS cusub 6
Baaraha dayrta ee laga heli karo Apple Watch Series 4 ayaa mar kale badbaadiyey nolol kale, xaaladdan oo ah haweeney 87 jir ah oo shil baabuur ku dhacday
Apple Watch, caafimaadka iyo isticmaale kale oo qaddiya howlaha ECG ee saacadda
Shaki la'aan, haysashada suurtagalnimada in lagu sameeyo ECG meel kasta iyo wakhti kasta marwalba way wanaagsan tahay. Taxanaha Apple Watch 4 shaki la’aan waa weyn yahay
Fasax cusub oo muujinaya suunka Apple Watch oo leh kamarad ku dhex jirta ama dareemayaal la mid ah
Shirkadda Apple Pay ayaa si lama filaan ah ku timid waddamada Boortaqiiska, Griiga iyo Romania
Haatan Apple Pay waxay ka soo muuqatay Boortaqiiska iyo Slovakia waxaa lagu daray dalka Boortaqiiska ee ku yaal Yurub gudaheeda, waxaa jira dalal aad iyo aad u badan oo laga heli karo.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha waxaa lagu casuumay inay isku dayaan watchOS 6 beta
Apple waxay u siideysaa qaar ka mid ah noocyada beta-ka ee loogu talagalay dadka isticmaala nasiib-darrada iyagoo diraya emayl Beta-ku wuxuu la mid yahay kuwa horumariyaha
Cusboonaysiinta amniga ee AirPort iyo Kaabsoolka Waqtiga
Apple waxay sii deyneysaa nooc cusub oo firmware ah oo loogu talagalay AirPort Extreme, AirPort Express, iyo Time Capsule. Waxay xalisaa cillad xagga amniga ah
tvOS 13 waxaa ku jira PiP (Sawirka Sawirka) ku shaqeeya Apple TV
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee ka iman doona gacanta tvOS 13 waxaa laga helaa shaqada Sawirka Sawirka, shaqadan oo aysan Apple ku dhawaaqin WWDC 2019
Apple TV + waxay diiradda saari doontaa dadaalkeeda wax soo saarka filimka, ma ahan oo keliya taxanaha TV-ga
Apple kaliya ma rabto inay naftooda u huro soo saarista taxanaha, laakiin sidoo kale waxay rabaan inay galaan soosaarka filimka.
Kaameradda Logitech Circle 2, oo la sii daayay laba sano ka hor, ayaa taageeri doonta muuqaalka Keydka Muuqaalka HomeKit Secure ee iCloud
Garaacista muraayadda Apple Watch oo leh shaashad. Mid ka mid ah tijaabooyinka isku halaynta Apple
Apple waxay leedahay tijaabooyin kala duwan oo iska caabin ah qalabkeeda midkoodna waa inuu ku dhufto muraayad ku jirta muraayadda Apple Watch
Galiye wuxuu soo bandhigayaa Biyo Cusub iyo Diidmada Kiisaska iPad Pro
Shirkadda 'Catalyst' ayaa hadda soo bandhigtay laba dabool oo cusub si loo ilaaliyo labadaba iPad Pro iyo Apple Watch Series 4 mar walba xagaagan.
Wallet wuxuu la jaan qaadi doonaa tikidhada garoomada jaamacadaha ee Mareykanka
Wallet ayaa kuu oggolaan doonta inaad tikidhada ku keydiso ciyaaraha jaamacadaha ee Mareykanka dhexdeeda iPhone iyo Apple Watch
Muusikada aan ku haysanno iTunes ayaa laga heli karaa barnaamijka cusub ee Apple Music
Dhammaan maktabadda muusikada ee aan ku leenahay iTunes-ka ku yaal Mac, waayi maayo oo waxaa laga heli doonaa barnaamijka Apple Music
IOS 13 ayaa noo sheegi doonta haddii aan hees cusub ku darno liiska muusikada Apple Music ee horeyba loogu soo daray
Iyada oo la adeegsanayo macruufka 13, mar dambe laguma darin isla heestii isla liistada isla wax ka badan hal munaasabad.
Animation cusub oo loogu talagalay Apple Watch oo ku amraya watchOS 6
Apple wuxuu ku darayaa animation cusub oo loogu talagalay in saacadda lagu xiro saacadaha watchOS 6. Faahfaahinta yar yar ee soo ifbaxa saacadaha kadib beta-kii ugu horreeyay
iTunes ayaa sii wadi doonta in loo helo Windows
Nooca 'iTunes for Windows' wuxuu ahaan doonaa siduu yahay ilaa iyo haatan, in kasta oo xaqiiqda ah in macOS Catalina loo qaybiyay codsiyo kala duwan
WatchOS 6 ma la jaan qaadi doonaa Apple Watch-kayga?
Waa kuwee noocyada Apple Watch ee ku habboon nidaamka cusub ee watchOS 6
IOS 13 iyo iPadOS: dhammaan wararka Apple soo bandhigtay
Waxaan horeyba u ogaanay wararka ugu muhiimsan ee ka imaan doona nooca xiga ee iOS 13, wararka aan kuugu sheegeyno qodobkaan.
tvOS waxaa lagu cusbooneysiiyay taageero badan oo adeegsadeyaal ah iyo kontaroolada konsole ee Apple Arcade
Apple waxay cusbooneysiineysaa nidaamka hawlgalka ee Apple TV-ga, tvOS, oo leh taageero badan oo adeegsadeyaal ah iyo taageero loogu talagalay kontoroolayaasha kontoroolka sida PS4 iyo XBOX.
Ka dib hoos u dhaca ballaaran ee adeegyada Google Cloud, Apple sidoo kale saameyn ayey ku yeelan kartaa adeegsiga adeegyadan iCloud.
Dhimashada iTunes waxay ku dhowdahay maalin ka mid ah WWDC 2019
Dhaqdhaqaaqyada ay Apple sameysay saacadihii ugu dambeeyay waxay soo jeedinayaan in wararka xanta ah ee ku saabsan luminta iTunes-ka la xaqiijin karo berri
Apple waxay shaqaaleysiisaa Disney Executive oo ah adeegga fiidiyowga
Chiara Cipriani ayaa ah astaamihii ugu dambeeyay ee Apple ee loogu talagalay adeegga fiidiyowga ee soo dejinaya, adeeggaas oo imaan doona adduunka dayrta.
Sida loo xayaysiiyay, Texture wuxuu hoos u dhigayaa indhoolayaasha, isagoo u oggolaanaya Apple News +
Adeegga rukunka joornaalka ee u oggolaaday Texture ayaa hadda gebi ahaanba la xiray iyada oo lagu casuumay dadka isticmaala inay isticmaalaan Apple News +
Apple waxay cusbooneysiisaa barnaamijyada Dhacdooyinka Apple ee Apple TV iyo Music Memos oo leh taageero loogu talagalay iPhone X
Codsiga lagu raacayo dhacdooyinka Apple ee Apple TV, Dhacdooyinka Apple ayaa hadda la cusbooneysiiyay iyadoo la beddelayo astaanta sida ugubnimada ugu weyn.
Wiilka laxamiiste ee heesta '' Rainbow over '' wuxuu ku dacweeyaa Apple iibinta muusigga burcad-badeedda
Apple, sida shirkadaha kale ee iibiya muusikada qaab dijitaal ah, waxay wajaheysaa dacwad cusub oo ku eedeysay inay iibiyaan muusig burcad ah.
Apple waxay si lama filaan ah u cusbooneysiisaa iPod Touch waxayna ku dareysaa A10 Fusion chip
Dhaqdhaqaaq lama filaan ah nimankii ka socday Cupertino ayaa hadda bilaabay iPod Touch oo cusbooneysiiyay processor A10 iyo horumarin kale
Boqolaal qof ayaa ka shaqeynaya hagaajinta Apple News + sida uu sheegay Eddy Cue
Apple waxay diyaarinaysaa boqolaal shaqaale ah si ay u horumariso adeegga cusub ee Apple News + iyo hagaajinta soo dhaweynta ay heyso.
Apple wuxuu ku guuleystey abaalmarinta "Hal-abuuraha Suuqa ee Sanadka" xafladda Cannes Lions
Apple waxaa la gudoonsiiyay abaalmarinta hal abuurka suuq ee sanadka taas oo aqoonsaneysa dhabbaha shirkada sanadkii tagay.
Qeybaha kooban ee dayactirka ee Apple Watch Series 3 ayaa ku siin kara taxanaha 4
Apple waxay cusbooneysiineysaa qaybta Adiga ee Apple Music oo leh talooyin cusub oo ku saleysan dhadhankeenna
Ragga ka socda Cupertino waxay cusbooneysiiyaan Apple Music iyaga oo wata warar ku jira qaybta 'For You' iyo playlists cusub oo leh muusig ku saleysan dhadhankeenna.
iTunes wuxuu u kala sooci doonaa shaqooyinkiisa barnaamijyo kala duwan
Marka la sii daayo macOS 10.15, wax waliba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in Apple u kala saari doono howlaha iTunes barnaamijyo gooni ah.
Apple Music hadda waxay la jaan qaadi kartaa Amazon Echo iyo Fire Stick oo ku kala yaal Australia iyo New Zealand
Isticmaalayaasha Amazon Echo iyo Amazon Fire Stick ee kala deggan Australia iyo New Zealand hadda waxay ku isticmaali karaan Apple Music qalabkooda.
Apple Pay waxay dhowaan imaaneysaa 16 suuq oo cusub
Waxay umuuqataa in balaarinta Apple ee 2019 aan loo yareyn doonin sidii Tim Cook uu ku dhawaaqay 25-kii Maarso.
Sida loo xadido keydinta sawirka Apple Watch
Si fudud u xaddid kaydinta sawir-kaaga ee Apple Watch. Waxaan ku baraynaa sida loo sameeyo ficilkan qaab fudud
Bang & Olufsen waxay dib u cusbooneysiinayaan Beoplay A9 adoo ku kordhinaya taageerada AirPlay 2
Shirkadda Bang & Olufsen ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay jiilka cusub ee Beoplay A9, jiil cusub oo bixiya AirPlay oo ah soojiidashada ugu weyn.
Hayso jaban Apple Watch Series 2? Apple wuxuu u beddelaa taxanaha cusub ee 3
Apple-ka waxay dhaafeen dukumiinti gudaha ah oo ay ku badalayaan Apple Watch Series 2 oo ay waxyeeleeyeen taxane cusub oo 3 ah
WatchOS 6 waxay lahaan doontaa App Store u gaar ah iyo goobo cusub
Qaar ka mid ah sheekooyinka cusub ee watchOS 6 ayaa loo muujiyay inay tahay App Store u gaar ah iyo dials cusub oo leh naqshado iyo dhibaatooyin kala duwan
Midowga Yurub wuxuu baarayaa Apple cabashooyinka tartan ee Spotify
Shirkadda Spotify waxay heshaa dacwaddeeda kahor Midawga Yurub ee ku aaddan tartanka Apple ee in laga baaraandego, hadda waxa kaliya oo hadhay in la arko qaraarka Midowga Yurub.
Boqortooyada Midowday (UK) waxay horey u aqbashay Apple Pay inay ku bixiso adeegyada dowlada qaarkood
Dowladda Boqortooyada Ingiriiska ayaa bilowday inay u oggolaato adeegsiga Apple Pay inay ku bixiso qaar ka mid ah adeegyada khadka tooska ah ee ay siiso muwaadiniinta.
Badeecada Apple oo lagu qiimeeyay in ka badan $ 100 oo laga xaday bakhaarada Amazon
Shaqaalaha bakhaarka Amazon ee Delaware ayaa la ogaaday inay xadeen alaabada Apple ee qiimahoodu ka badan yahay $ 100.000.
Powebeats Pro hadda waa la keydin karaa, in kasta oo keliya Mareykanka
Powerbeats Pro hadda waxaa loo heli karaa boos celin iyadoo loo marayo bogga Apple ee Mareykanka qiimahiisa waa $ 249
Shirkadda CounterPoint waxay xaqiijineysaa awoodda iibka Apple Watch
Apple Watch waa sida uu sheegayo CounterPoint xukunka cad ee iibka smartwatch. Iibintu waxyar ayey ka kordheysaa isla muddadaas sanadkii hore
Maxaad ku dari laheyd watchOS 6? Fikradani waxay na tusaysaa warar xiiso leh
Fikradda watchOS 6 waxay na tusaysaa warar xiiso leh oo lagu dari karo Apple Watch OS
App-ka LaLiga waa la cusbooneysiiyay oo waxaa lagu sharraxay qaab mugdi ah
Habka mugdiga ah ayaa gaaraya barnaamijyo badan, oo ay ku jiraan LaLiga. Waxaan ka cusbooneysiin karnaa barnaamijka App Store
HomeRun waxay ku dareysaa astaamo cusub oo sii hagaajinaya fursadaha codsigan si loogu maareeyo HomeKit Apple Watch-kaaga.
Daraasad dhowaan Microsoft soo saartay ayaa muujisay in Siri iyo Kaaliyaha Google loo adeegsado isla heer isticmaalayaasha, iyadoo Alexa ay aad uga dambeyso.
Laga bilaabo 3-da Maajo, isticmaalayaasha daneynaya inay iibsadaan Powerbeats Pro way awoodi doonaan inay sidaa sameeyaan, laakiin waa inay sugaan illaa 10-ka Maajo si ay u helaan.
Amazon wali cadaab ayey kuxirantahay qulqulka muusikada waxayna bilaabi kartaa adeeg Hi-Fi ah
Xanta ugu dambeysa ee laxiriirta baahinta muusikada ee Amazon waxay soo jeedineysaa inay bilaabi karto adeeg Hi-Fi kahor dhamaadka sanadka.
Fikrad ayaa ina baraysa waxa saacadaha soo socda ee 6 ay noo keeni karaan
Waxaan helnaa mid ka mid ah fikradaha ugu horreeya ee soo socda ee watchOS 6: waardiyeyaasha cusub ee 'Marvel iyo Star Wars', barnaamijka nafaqada, Buugaagta maqalka, iyo Gawaarida.
Surfer wuxuu dib u helayaa Apple Watch lix bilood ka dib markii uu lumiyay welina wuu shaqeynayaa
Waxaan kuu sheegeynaa sheekada badmareenka Robert Bainter, wuxuu lumiyay taleefankiisii ​​Apple Watch intii uu hawada ku jiray oo 6 qof ayaa helay inuu shaqeynayo oo u yeeray.
Powerbeats Pro waxaa markii hore lagu heli karaa oo kaliya madow
Markii hore, Powerbeats Pro cusub waxaa lagu heli karaa oo kaliya madow. Inta kale ee foolka maroodiga, mooska iyo midabada buluuga ah ayaan imaan doonin ilaa xagaaga.
macOS 10.15 waxaa ku jiri kara shaqooyin cusub oo xaqiijin ah oo loogu talagalay Apple Watch, oo lagu daray gelitaanka ama Apple Pay
Beyoncé albumkeeda Lemonade wuxuu ku dhufan doonaa Apple Music maalmo yar gudahood, laakiin leh
Apple Music, sida inta kale ee adeegyada fidinta muusikada, waxay ku raaxeysan doontaa albamka Lemonade ee Beyonce sii daayay 3 sano ka hor.
Microsoft waxay bilaabi doontaa bedel ka duwan kan AirPods
Microsoft waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto bedel ka duwan kan Apple's AirPods, sidoo kale Amazon, inkasta oo xilligan aanan ogeyn goorta.
Apple waxaa baari doona maxkamada tartamada Nederland sida ay u kala eexato barnaamijyadooda
Maxkamadda tartamada ee Dutch-ka ayaa sheegtay inay baari doonto haddii Apple ay doorbideyso codsiyada ay ku waxyeelleyneyso dhinacyada saddexaad.
Haddii aad leedahay Apple TV waxaad hadda cusbooneysiin kartaa nooca 12.2.1
Apple wuxuu soo saaray nooc cusub oo tvOS ah oo loogu talagalay dadka isticmaala sanduuqa sare. Waxay umuuqataa in sixitaanka cayayaanka uu yahay sababta ugu weyn
Apple ayaa ka saareysa waxyaabaha ku jira Apple Music-ka Shiinaha ka dib amarada dowladda
Sannad-guuradii 30-aad ee xasuuqii Fagaaraha Tiananmen ayaa soo socota, dowladduna waxay dooneysaa inay wax ku xasiliso shacabkeeda.
Qaab dhismeedku wuxuu ku kacay Apple ku dhowaad $ 500 milyan
Qiimaha iibinta Texture, waxa loogu yeero Netflix ee joornaalada, waxay ku dhowdahay 500 milyan oo doolar.
Apple waxay soo saartay bar cusub iyadoo ujeedkeedu yahay inaan u iibsanno xarig dheeri ah Apple Watch-keena
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen xayeysiin cusub oo ay ku dhiirrigelinayaan noocyada cusub ee Apple Watch suumanka, habka ugu wanaagsan ee shaqsiyadayada loo shaqsiyeeyo.
ECG waxay sii wadaa inay layaabto kuwa ugu shakisan waxtarkeeda [kiiska dhabta ah ee AF]
Qalab koronto ku shaqeeya oo leh Apple Watch Series 4 ayaa lagu ogaan karaa cilladda atrial fibrillation waxaana ku soo bandhigeynaa kiis dhab ah
Marka waxaad ku hawlgelin kartaa kaarka Apple-ka jirka ah iPhone-kaaga
Waxaa la sifeeyey sida hawsha firfircoonaanta ee kaarka cusub ee Apple Card ula jiri doonto aaladdayada. Waxaan ku tusaynaa dhamaan talaabooyinka aan qaadi doono.
Apple waxay kireysataa injineer kale oo Google AI ah
Ian Goodfellow, oo ah aabaha shabakadaha dhaliya ee iska soo horjeeda, wuxuu ku biiray shaqaalaha injineernimada Apple, wuxuuna ka yimid Google.
App Store ayaa soo degsada 5% rubuca ugu dambeeya
Soo dejinta App Store ayaa hoos u dhacay 5% rubucii u dambeeyay, hoos u dhacii ugu horreeyay ee weynaa tan iyo rubucii ugu horreeyay ee 2015.
ITunes waxay umuuqataa inay maalmaheeda kujirto macOS
Haddii uu jiro codsi Apple ah oo ururiya dib u eegis diidmo ah, waa shaki la'aan iTunes. Codsiga, waxaa laga heli karaa macOS iyo ...
200.000 oo qof ayaa durbaba tijaabinaya adeegga cusub ee Apple News +
Adeegga rukunka majaladda Apple, Apple News +, ayaa soo jiitay indhaha in ka badan 48 oo qof 200.000 saac gudahood.
Shaashadaha Apple Watch Series 5 waxaa soo saari doona shirkadda Japan Display
Muuqaalka Japan wuxuu noqon doonaa soo saaraha mas'uulka ka ah, ku dhowaad gaar ahaan, soo saarista shaashadaha jiilka xiga ee Apple Watch
Xayeysiiska cusub ee Apple wuxuu muujinayaa sida wax soo saar leh aan ula shaqeyn karno wax soo saarkooda
Ragga ka socda Cupertino waxay ku adkaysanayaan inaan u adeegsanno aaladooda goobta shaqada xayeysiis cusub oo noo sheegaya dhammaan faa'iidooyinka wax soo saar.
Swatch ayaa ku guuleysatay dacwaddii Apple ee halkudhiggii "Calaamadee Kala Duwan"
Soo-saaraha Swatch, ayaa ku guuleystay dacwadda ay Apple ka gudbisay ee ku aaddan adeegsiga hal-ku-dhigga "Tick duwan"
Apple Music waxay la jaan qaadi doontaa Chromecast dhowaan, ugu yaraan nooca loogu talagalay Android
Adeegga muusikada ee qulqulaya ee Apple ayaa dhawaan la jaan qaadi kara Chromecast, ugu yaraan nooca Android.
Counter Point wuxuu sheeganayaa AirPods inay gaareen 60% saamiga suuqa
Shirkadda Counter Point waxay muujineysaa daraasad ay noo sheegayso in AirPods ay gaareen 60% saamiga suuqa
Waxaan u tartameynaa 5 liisano Infuse Pro 6
Waxaan uxidhnaa shan shati oo ah Infuse Pro 6, oo ah codsiga ugufiican ee lagu ciyaaro feylasha badan ee telefishinada kala ah iPhone, iPad iyo Apple TV.
Muuqaalka qarxay ee AirPods wuxuu xaqiijinayaa inaan dib loo hagaajin karin
Jiilka labaad ee AirPods wuxuu ku jiraa gacanta iFixit. Sida iska cad dhagaha dhagaha cusub lama hagaajin karo
Codsiga TV-ga sidoo kale waxaa laga heli doonaa jiilka 3aad ee Apple TV
Jiilka 3-aad ee Apple TV, oo ah qalab suuqa ku dhacay 2012, ayaa sidoo kale la jaan qaadi doona barnaamijka cusub ee TV-ga Apple.
TVOS-kii ugu horreeyay ee 12.3 beta ayaa hadda loo heli karaa horumariyeyaasha
Beta-kii ugu horreeyay ee waxa uu noqon doono cusbooneysiinta saddexaad ee weyn ee tvOS 12, hadda waa la heli karaa, in kasta oo xilligan keliya loogu talagalay kuwa horumariya
ECG ee Apple Watch ayaa hadda laga heli karaa Spain. Maxay tahay maxaase loogu talagalay
watchOS 5.2 iyo iOS 12.2 waxay dhaqaajinayaan shaqada ECG ee Spain. Waa maxay ECG? Maxaa loogu talagalay Sidee uga shaqeeyaa Apple Watch? Wax walba waan kuu sharxeynaa.
Nuxurka "Waa Waqti Show" ayaa hadda laga heli karaa YouTube-ka
Haddii aad rabto inaad aragto keyonte soo bandhigida adeegyada Apple cusub, waxaad si toos ah ugu samayn kartaa kanaalka Apple ee YouTube-ka.
Kuwani waa wararka HomePod ee nooca cusub ee 12.2
HomePod sidoo kale waxay heshay nooc cusub, kiiskan 12.2 oo leh horumarin yar laakiin muhiim ah.
Maamulaha guud ee shirkada Goldman Sachs ayaa xaqiijinaya in kaarka Apple uu isna imaan doono Spain
Waa inaan sugnaa oo aan aragnaa sida kaarka Apple loogu soo dhoweeyay Mareykanka, laakiin markii la soo saaray ka dib, Goldman Sachs wuxuu qorsheynayaa inuu adduunka ka billaabo.
Kuwani waa dhammaan joornaalada aan ka heli karno Apple News +
Haddii aad damacsan tahay inaad adeegsato adeegga rukunka joornaalka Apple, Apple News +, horay u sii ogow daabacaadaha aad ka heli doonto.
Apple wuxuu magacii afaraad ee Apple TV u magacaabay Apple TV HD
Ka dib markii la soo saaray Apple TV + cusub, raggii ka socday Cupertino waxay go'aansadeen inay u beddelaan jiilka afraad Apple TV Apple TV HD.
IOS 12.2 iyo watchOS 5.2 waxay ECG ee Apple Watch u keeni doonaan Yurub
IOS 12.2 iyo watchOS 5.2 waxay umuuqdaan inay furfurayaan shaqeynta ECG oo aan wali laga isticmaali karin meel ka baxsan Mareykanka iyadoo lala socdo Apple Watch Series 4
Apple TV + waa adeegga fiidiyoowga ee Apple
Ku dhowaad laba sano oo xan ah, Apple waxay soo bandhigtay adeeggeeda fiidiyoowga ah wax yar ka dib markii ay soo bandhigtay ...
Apple wuxuu dhaqaajiyaa Keynote qulqulaya si lama filaan ah, iyaguna way nagu qoslayaan ...
Ragga ku jira Apple waxay soo bandhigaan dareenkooda gaarka ah ee kaftanka waxayna kiciyaan qulqulka Muhiimka ah iyagoo tusaya Tiyaatarka Steve Jobs oo ay la socoto CarPlay shaashadda.
Apple wuxuu ku dari doonaa xirmooyinka kanaalka adeegiisa Streaming
Apple waxay ku dari doontaa kanaallo dhinac saddexaad ah oo ku saabsan baahinta adeegga aan u kireysan karno si aan u soo saarno adeegga telefishanka ee baahida loo qabo
Rarista jiilka labaad ee AirPods ayaa dib u dhac ku yimid bisha Abriil gudaha Mareykanka
Soo dhaweynta AirPod-yada cusub ayaa ah mid aad u wanaagsan oo Mareykanka gudihiisa waa inaan sugnaa ilaa bisha Abriil si aan u qabanno.
Codsiga Dhacdooyinka ee Apple TV hadda waa diyaar
Apple waxay cusbooneysiisaa barnaamijka Dhacdooyinka ee TV-ga Apple si ay ula socoto mucjisada baahinta Isniinta soo socota, Maarso 25
AirPods cusub oo leh fiilo wireless iyo "Hey Siri"
Apple wuxuu leeyahay seddex seddex isbuucaan, isagoo soo bandhigaya ipad cusub Isniinta, iMac cusub, Talaadada iyo, maanta oo Arbaco ah, cusub ...
Ugu dambeyntii beta beta wuxuu muujinayaa waafaqsanaanta AirPower
Kadib soo bandhigid jahwareer ah oo ku saabsan Apple sariirta lacag-bixinta, AirPower, oo u oggolaanaysa isku-darka isku-darka saddexda ...
Berrito ma noqon kartaa markiisa iPod Touch?
Kadib laba maalmood oo ah soosaarka alaabada ee kujira bogga Apple, waxaa lagu xantaa in berri ay noqon karto markiisa iPod Touch.Ma rumaysanaysaa?
Falanqeeyayaashu ma cadda qorshaha Apple ee adeeggiisa VOD
Haddii ay dhacdo in qofna qabto wax su'aalo ah, agaasimaha guud ee Netflix wuxuu xaqiijinayaa inuusan qorsheyneynin inuu la shaqeeyo adeegga fiidiyowga ee Apple
AppleCare + waxaa laga heli karaa Spain
Apple wuxuu ku darayaa AppleCare + dadka isticmaala Spain. Tan AppleCare + jajabinta shaashadda ee waxyeelada kale waa lagu daboolay
Apple waxay soo bandhigeysaa iPad Air cusub iyo iPad Mini oo dib loo habeeyay
Apple waxay si rasmi ah u soo bandhigtay iPad-yada cusub ee sanadkan: iPad-ka 10,5-inji ah iyo iPad mini la cusbooneysiiyay oo la jaan qaadi kara qalinka Apple
Daraasad lala sameeyay Jaamacadda Stanford waxay muujineysaa waxtarka Apple Watch si loo ogaado arrhythmias
Apple iyo Stanford waxay daabacaan natiijooyinka daraasad ay ku qiimeynayaan kalsoonida Apple Watch ee lagu ogaanayo arrhythmias
Shirkadda Spotify ayaa si adag ugu jawaabeysa Apple
Khilaafka u dhexeeya Spotify iyo Apple, ayaa qayb cusub ku yeeshay jawaabtii ay shirkadda Iswiidhishku ku daabacday bayaankii ugu dambeeyay ee Apple
Apple Video wuxuu sidoo kale yeelan doonaa waxyaabo bilaash ah oo loogu talagalay macaamiisha Apple
Fiidiyowga Apple ee adeegga dalabka ayaa ku saabsan in la soo bandhigo, laga yaabee Isniinta, Maarso 25 ...
Apple Music waxay timaadaa Amazon Fire TV ee Mareykanka, waxaa laga sii deyn doonaa dalal kale goor dhow
Ka dib markii la bilaabay Apple Music ee loogu talagalay Amazon Echo, ragga ka soo jeeda Amazon ayaa la yaabay iyaga oo kicinaya xirfadda Apple Music ee Amazon Fire TV.
HBO, Showtime iyo Starz waxay noqon doonaan Apple oo kor u qaadaya shaashadda adeeggeeda socodka
Adeegga fiidiyoowga ee Apple wuxuu ka imaan karaa HBO, Starz iyo Showtime si uu ula socdo asalka asalka ah.
Apple Music ayaan ka caban doonin kor u qaadista lacagta boqornimada ee fanaaniinta Mareykanka
Ragga ka socda Apple Music waxay xaqiijinayaan in aysan ka caban doonin sara u kaca ku yimid royaliyada fanaaniinta Mareykanka maadaama ay qabanayaan adeegyada kale.
Castro waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo qayb cusub oo leh waxyaabaha la soo xulay
Macmiilka Castro podcast ayaa hadda la cusbooneysiiyay isagoo ku daray tab cusub, Discovery, halkaas oo aan ka heli doonno waxyaabo kooban toddobaad kasta
Sonos waxay soo saareysaa jiilka labaad ee hal nooc oo leh processor aad u awood badan
Sonos ayaa hadda bilaabay jiilka labaad ee Sonos One, oo ah jiil labaad oo ka awood badan isla markaana leh xusuus badan oo diyaar u ah shaqooyin cusub.
Apple waxay lahaan kartaa dhacdooyin lama filaan ah si ay ugu bilawdo qalabkeeda 5G
Kadib MWC 2019 oo lagu calaamadeeyay kororka tiknoolajiyada 5G, qorshayaasha Apple waxay umuuqdaan kuwa aan go'aan laga gaarin kadib markay dhibaato kala kulmeen alaab-qeybiyeyaasheeda.
Qaar ka mid ah soosaarayaasha Hollywood-ka ayaa leh Apple uma ogolaanayo inay si xor ah u shaqeeyaan
Sida laga soo xigtay warshadaha Hollywood, Apple ma siineyso xorriyadda wakiilada iyo soo saarayaashu u baahan yihiin inay abuuraan waxyaabo.
Taasi waxay u badan tahay saacadaha soo socda ee 6 ee aad rabto inaad ku haysato Apple Watch-kaaga
Waxaan bilownay inaan aragno fikradaha ugu horreeya ee waxa xiga watchOS 6, nidaamka xiga ee hawlgalka ee Apple Watch, uu noqon karo.
Sida loo adeegsado AirPods iyo qalabka kale ee Bluetooth-ka leh Apple TV
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ay Apple TV na siiso marka loo eego kuwa kale ee warbaahinta ama telefishannada, waa ...
Siri wuxuu damiyaa nalka jikada. Waayahay, hadda. Waan ka xumahay, waxbaa qaldan Isku day "
Siri waxay u dirtaa fariin guuldaro ah Apple Watch markaan ka codsano inay ku sameyso ficil qalab Homekit la jaan qaada
Kalabar wadarta iibka smartwatch ee 2018 waxaa loogu talagalay Apple Watch
Suuqa smartwatch ayaa leh guuleyste cad oo kani waa Apple Watch. Intii lagu jiray 2018, waxay la wareegtay boqolkiiba 50 wadarta guud ee suuqa
Apple Music ugu dambeyn ma gaari doono Hoyga Google
Waxaan ku jirnaa bartamihii Shirka Wareegtada Dunida ee Mobile-ka 2019 waxayna umuuqataa inaadan kala saari karin wararka rasmiga ah iyo ...
Smartwatch-ka isku laabma ee ugu horeeya ee ku wareegsan curcurka waxaa loo yaqaan Nubia Alpha
Markii ay u muuqatay in adduunka saacadaha casriga ahi uusan wax badan abuuri karin, Nubia waxay na tusaysaa smartwatch muuqaal leh oo leh shaashadda OLED
Sida laga soo xigtay Bloomberg waxaan lahaan doonnaa barnaamijyo caalami ah oo loogu talagalay macruufka iyo macOS sanadka 2021
Xogta ugu horreysa ee is waafajinta macOS iyo macruufka ayaa bilaabeysa in la ogaado, barnaamijyada guud waxay imaan doonaan sanadka 2021.
Apple waxay cusbooneysiineysaa isdhexgalka waxayna hagaajineysaa marinka barnaamijka kuxiran
Websaytka barnaamijka ku-xirnaanta Apple wuxuu hadda helay weji weyn oo imminka wuxuu u soo bandhigayaa macluumaadka qaab aad u cad oo fudud.
HomePods waxay maareeyaan inay kordhiyaan iibka sida ku xusan warbixinta Istaraatiijiyada Istaraatiijiyada
HomePod wuxuu sii wadaa inuu ku daro isticmaaleyaasha inkasta oo uu ka mid yahay kuwa ku hadla kuwa caqliga badan ee aan suuqa ku haysanno. Iibku si tartiib tartiib ah ayuu u kordhaa
Apple waxay bilaabi doontaa AirPods cusub oo ay weheliso AirPower qeybtaan koowaad ee 2019
Xanta ayaa sii socota in wax walbaa ay diyaar u noqon karaan soo bandhigida cusub ee AirPods iyo AirPower inta lagu gudajiray qeybtii hore ee 2019.
Beddelka cusub ee Samsung ee AirPods waa la sifeeyey
20-ka Febraayo, shirkadda reer Kuuriya ee Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigi doonta jiilka cusub ee IconX, kaas oo ay kula tartami doonaan shirkadda Apple's AirPods.
Apple waxay iibsataa barnaamijka codka PullString si loogu cusbooneysiiyo Siri
Shirkadda ku saleysan Cupertino waxay iibsatay bilawga PullString si loo hagaajiyo hawlgalka iyo waxqabadka Siri ee noocyada mustaqbalka ee nidaamyadeeda hawlgalka.
Apple Music hadda waxay noo ogolaaneysaa inaan siino bil bil ah asxaabteena
Apple ayaa kadis ku ah adoo kicinaya dallacsiin cusub si dib loogu soo nooleeyo Apple Music: hadda waxaan siin karnaa bil bilaash ah saaxiibbadeen
Sida looga fogaado ogeysiisyada isdabajoogga ah ee Khariidadaha ku yaal Apple Watch
Waxaan dhaqaajin karnaa ama joojin karnaa ogeysiisyada hagida ee tallaabo-tallaabada ah ee Apple Watch markasta oo aan ka rabno goobaha Apple Watch
Sida loo kiciyo ama loo joojiyo wicitaanka gurmadka ee Apple Watch
Waxaan ku tusineynaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u dhaqaajiso oo aad u joojiso ikhtiyaarka wicitaanka gurmadka ee Apple Watch-kaaga
Apple Watch waxay ka caawisaa haweeneyda inay ogaato inay leedahay Tachycardia supraventricular
Thanks to Apple Watch, kalkaaliye caafimaad oo ku nool North Carolina ayaa ogaatay in garaaca wadnaha uu sarreeyo, kuna qasbay inay u tagto dhakhtarka oo ay hesho sababta.
Iibka Smartwatch ayaa kor u kacaya 61% sanadkii la soo dhaafay
Markay sannaduhu sii marayaan, waxaa marba marka ka dambaysa sii badanaya in lagu arko saacado smartwatches ah curcurka dadka isticmaala badan.
Daabacayaasha ayaan gebi ahaanba ku qanacsanayn soo-jeedinta Apple ee ku-biiritaanka Apple News
Ragga ka socda Cupertino waxay ku guda jiraan gorgortanka adeegga ku-xigga ee Apple News inkasta oo daabacayaashu aysan ku qancin
Iibinta iyo xiisaha AirPods way sii kordhayaan
Waxaan xasuustaa soo bandhigitaankii AirPodskii ay la socdeen iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus. Ka dib markii laga saaray dekedda ...
Nomad wuxuu soo saaray suunka Titanium Band cusub
Nomad waa shirkad samaysa qalab loogu talagalay aaladaha Apple markanna waxay soo bandhigaysaa kooxda 'Titanium Band', oo ah suunka cajiibka u ah Apple Watch.
Celceliska qarashka ku baxay App Store sanadkii 2018 wuxuu ahaa $ 79
Celceliska kharashaadka ay isticmaaleyaasha Mareykanka ku bixiyeen App Store sanadkii 2018 waxay gaarayeen $ 79, taasoo ka dhigan koror dhan 36% marka loo eego sanadkii ka horeeyay.
In lagu weydiisto lambarkaaga sirta ah ee iCloud ka hor intaadan xadin ama Phishing ka mid ah xulashooyinka loo adeegsaday furitaanka iCloud
In lagu waydiiyo lambarkaaga sirta ah ee iCloud kahor intaadan xadin iPhone-kaaga ama phishing waxay ka mid yihiin xulashooyinka ugu badan ee la adeegsaday si loo furo iCloud
Apple waxay horeyba u laheyd shaqaale ka shaqeeya modemyada soo socda ee qalabkooda
Wiilasha Cupertino mar horaba waxaa loo diyaarin lahaa koox ahaan horumarinta moodooyinka (Apple) u gaarka ah aaladaha mobilada.
Apple Music waxay ka faa'iideysataa Abaalmarinta Grammy oo ay weheliso qaar ka mid ah Memojis ee Shawn Mendes, Ariana Grande, iyo Kacey Musgraves
Apple ayaa hadda bilowday olole xiiso leh oo lagu dhiirrigelinayo Apple Music oo ay ku jiraan Memojis oo ay soo wada saareen Shawn Mendes, Ariana Grande, iyo Kacey Musgraves oo loogu talagalay Grammys
Kuwani waa qaar ka mid ah tallaabooyinka Apple si qarsoodi ah u ilaalineyso horumarinta mashaariicdeeda
Waad ku mahadsantahay cabashada ay FBI-du ka gudbisay shaqaale Apple ah oo lagu eedeeyay xatooyada sirta ganacsiga, waxaan ka warqabnaa qaar ka mid ah talaabooyinka amaanka ee Apple ee looga hortagayo in ay wax dhacaan.
Hadda waxaad ku isticmaali kartaa kaarkaaga Banco Mediolanum Apple Pay
Apple Pay waxaa hadda laga heli karaa kaararka in ka badan 20 baan oo Spain ku yaal halka mid kalena hadda la hawlgaliyay ...
Baadhitaanka dayrta ee Apple Watch wuxuu badbaadiyaa nolol kale
Jiilka afraad ee Apple Watch, Taxanaha 4, kaliya looma jeedin dayactir qurxoon oo muhiim ah oo laga helayo terminaalka (ugu yaraan ...
App-ka Amazon Prime Video ee Apple TV wuxuu hadda taageeraa shaqada raajada
Codsiga Amazon Prime Video ee Apple TV wuxuu ugu dambeyntii la jaan qaadayaa shaqada raajada ee adeeggan, oo ah adeeg siinaya helitaanka macluumaadka IMBD ee taxanaha ama filimka
Kooxda FaceTime waxay ahaan doontaa naafo iOS 12.1.3 iyo wixii ka sii horreeya
Apple waxay isku diyaarineysaa inay sii deyso macruufka 12.1.4 si loo xaliyo dhibaatooyinka kooxda ee FaceTime, marka loo eego noocyadii hore waxay ahaan doontaa mid naafo ah.
Bishan Febraayo waxaan leenahay caqabad waxqabad leh Apple Watch iyo kalfadhiyo tababar oo lala yeelanayo Maanta Apple
Apple waxay rasmi ka dhigeysaa loolanka cusub ee bisha Febraayo oo ka kooban xirida giraanta jimicsiga muddo toddobaad ah si loo gaaro guusha
Sonos wuxuu hadda la jaan qaadayaa inta badan adeegyada fidinta fiidiyaha sida Spotify, Deezer, iyo Apple Music. Ilaa…
Ma leedahay Apple Music oo ma waxaad la duulaysaa American Airlines? ku xir oo dhageyso muusikadaada si bilaash ah
Ragga ka tirsan Apple Music waxay la safteen American Airlines si ay noo oggolaadaan inaan adeegsanno Wi-Fi-ka diyaaradda saarna oo aan si bilaash ah uga dhagaysanno muusikadayada.
Shaqaalihii Shirkadda Apple ee Shiinaha ayaa loo xiray eedeymo ah inay xadeen sirta ganacsiga ee la xiriirta Mashruuca Titan
FBI-da ayaa xirtay muwaadin u dhashay Shiinaha oo ka shaqeynayay shirkadda Apple kadib markii ay ku eedeeyeen inuu xaday sirta ganacsiga ee la xiriirta nidaamka wadista ismaamulka.
Apple Music waxay gaadhay 50 milyan oo macaamiil ah "markale"
Apple Music waa adeegga muusigga ee isdabajooga ee Apple oo ka soo baxay Beats Music waana la soo bandhigay ...
Waxaad heli kartaa Apple Watch Series 1 ama 2 haddii Taxanahaaga 0 jabo
Apple wuxuu soo bandhigayaa qoraal gudaha ah oo ay ugu beddeleen Apple Watch Series 0 moodooyinka cusub ee Apple Watch Series 1 ama 2
Kadib natiijooyinkii xumaa ee Apple, waxay umuuqataa in wixii ugu xumaa aysan wali imaan ...
Falanqeeyaha caanka ah Ming-Chi Kuo ayaa daabacay natiijooyin aan aad u qancin karin oo loogu talagalay wiilasha Cupertino rubuckan koowaad ee 2019.
Apple waxay dejisay nidaam nabadgelyo si AirPower aysan u faragalin aaladaha kale ee magnet-ka ah
Ragga Cupertino waxay u diyaarin lahaayeen nidaam nabadgelyo AirPower cusub oo ka hortagi lahaa inay farageliyaan aaladaha kale ee magnetka ah.
Sonos wuxuu qorsheynayaa inuu soo saaro noocyo badan oo dhagaha la geliyo
Soosaaraha Californian-ka ee Sonos, ayaa ka shaqeynaya noocyo badan oo dhagaha la geliyo ah oo arki kara nalka sanadka soo socda.
Apple waxay shaqaalaysiisay maamulihii hore ee bateriga Samsung si ay u horumariso baytariyadeeda soo socda
Ragga ka socda Cupertino waxay la wareegeen madaxii hore ee baytariyada Samsung SDI iyadoo ujeedadu tahay hagaajinta baytariyada iDevices.
Raiisel wasaaraha Masar wuxuu rabaa in Apple ay ka aas aasto wadanka kana shaqayso dib u habaynta waxbarashada
Sida laga soo xigtay Raiisel wasaaraha Masar, Apple waxay door muhiim ah ka ciyaari kartaa dib u habeynta waxbarashada dalka.
AirPods 2 qeybta hore ee 2019
AirPods waxay inala joogeen in kabadan laba sano iyadoon wax isbedel ah, ama cusbooneysiin, ama qiimo dhimis intaa ka badan ...
Ugu dambeyntii watchOS 5.1.3 wuxuu hagaajiyaa "wiishka hadalka"
Waxay umuuqataa in yar un ka hor cusbooneysiintan ugu dambeysay ee watchOS oo kaliya imaanshaha isla Apple xallisay dhibaatada kor u qaadista hadalka
Apple waxay nagu dhiirrigelisay inaan sawirro ku qaadno iphone-keena asagoo bilaabay tartan sawir ah
Apple ayaa layaab ku abuurtay tartankii ugu horreeyay iyadoo sawiradeenna loo dooran karo Shot on iPhone.
Apple waxay heshiis gaar ah la gaadhay shirkadda ku eedeysay inay tikniyoolajiyadeeda u xaday Apple Watch
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in dacwadii udhaxaysay Apple iyo Valencell dib looga noqday kadib markay gaadheen heshiis gaar ah labada dhinac.
Japan waxay ka fiirsanaysaa inay ku dabaqdo sharciyada "sirta xiriirka" shirkadaha tiknoolajiyada ajaanibta ah
Japan waxay dooneysaa inay u fidiso sharciyada saameynta ku leh maareynta xogta muwaadiniinta shirkadaha ajaanibta ah ee ka howlgala dalka.
Hal sano oo dheeri ah, websaydhka Apple wuxuu xushmeeyaa Martin Luther King
Hal sano oo dheeri ah, websaydhka Apple wuxuu xushmeeyaa Martin Luther King, oo kamid ah halyeeyada shaqsiyadeed ee Tim Cook, madaxa fulinta Apple.
Apple waxay la shaqeeyaan Johnson & Johnson si loo hagaajiyo qorshooyinka caafimaadka
Si loo horumariyo aruurinta xogta caafimaadka ee Apple Watch, wiilasha Cupertino waxay la shaqeeyaan shirkadda caafimaadka ee Johnson & Johnson.
Apple ayaa lagu xukumay inuu bixiyo $ 440 milyan oo shirkad patent troll ah
Apple waxay aragtay sida patent troll uu mar kale ula baxay ku dhowaad 500 milyan oo doolar, dacwad socotay muddo ku dhow 8 sano.
Tim Cook wuxuu la wadaagayaa sheekada qof daahfuray in cilladda wadnaha ay sabab u tahay Apple Watch
Tim Cook ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray sheekada qofkii ugu dambeeyay si uu u arko sida ay Apple Watch ficil ahaan u badbaadisay noloshiisa.
Jiilka 7-aad iPod ayaa suuqa gali kara sanadkan
Sida laga soo xigtay iibiyeyaal kala duwan, Apple wuxuu ka shaqeyn karaa jiilka toddobaad ee iPod taabashada
Apple Music waxay sii deyneysaa wax yar oo ku saabsan sida Rami Malek u noqday Freddie Mercury ee Bohemian Rhapsody
Apple Music waxay si gaar ah u soo bandhigeysaa dukumiinti gaaban oo ku saabsan habka tarjumaadda Rami Malek oo loo yaqaan 'Freddie Mercury' oo loogu talagalay Bohemian Rhapsody.
Samsung, LG iyo Sony moodooyinka taageera AirPlay 2
Axadii la soo dhaafay Apple ayaa xayiraadda saartay si shirkadaha waaweyn ee telefishannada ka shaqeeya ay u soo bandhigaan iswaafajinta shirkadda AirPlay ...
Tim Cook "wuu ka baxaa" waxtarka weyn ee caafimaadka ay sameynayaan
Tim Cook wuxuu ka hadlayaa waxtarka weyn ee ay u leeyihiin caafimaadka ay sameynayaan
Dukaanka ugu yar Japan ee Apple inuu xirnaado weligiis 13 sano kadib markuu furmay
Ragga ka socda Cupertino waxay gaarayaan go'aanka ah inay xiraan Dukaanka ugu yar ee Apple Store iyo midka ugu da'da weyn Japan, Sendai Apple Store.
Nooca cusub ee WhatsApp 2.19.10 oo leh jawaabo qaas ah oo kooxo iyo inbadan ...
Amazon waxay iibisay in ka badan 100 milyan oo aaladda Alexa
Kuwa ku hadla Amazon ee Echo ee ay maamusho Alexa waxay dhaafeen 100 milyan oo unug oo la iibiyay.
Sida loo qiyaaso Apple Watch-kaaga si aad si fiican ugu cabirto jimicsigaaga
Apple iyo la-hawlgalayaasheeda waxay cusbooneysiiyaan heerka cusub ee USB-C oo leh nabadgelyo dheeri ah
Apple waxay ku sii socotaa xiisaheeda ku saabsan hagaajinta amniga dhammaan isticmaaleyaasheeda, ugu dambeyn amniga waa wax ...
Apple waxay si gaar ah u sii deysay filimka 'Yaa Daneeya' oo uu qoray Paul McCartney
Wiilasha Cupertino waxay si gaar ah u sii daayeen fiidiyowga Paul McCartney's single Who Cares, oo ah fiidiyoow fiidiyoow ah oo ka dhan ah dibindaabyada.
Mashruuca Marzipan wuxuu noqon karaa wax lala yaabo inbadan oo 2019 ah
Mashruuca Marzipan wuxuu gaari doonaa horumariyeyaasha sanadkan 2019 wuxuuna si weyn wax uga beddeli karaa xaaladda Mac App Store iyo ta iPad Pro
Codsiga beenta ah ee 'Amazon Alexa' ayaa la dhigay midka ugu horreeya ee App Store
Waxa aan Apple ka fileyno 2019
2018, oo ah sanad aynaan garanaynin inaan xasuusano ama ilawno, ayaa gabagabo ah oo waxaan dhigi karnaa ...
Barnaamijka RainAlarm XT wuxuu helayaa cusbooneysiin weyn
WatchOS 5.1.3 iyo tvOS 12.1.2 Beta XNUMX Hada Waa Laheli Karaa
Ragga ka socda Cupertino waxay shalay bilaabeen betas cusub oo ah dhammaan nidaamyada hawlgalka ee maareeya aaladaha ay hadda suuqa ku hayaan.
Apple wuxuu ka saarayaa cusbooneysiinta barnaamijka Shazam cusbooneysiin cusub
Kadib iibsiga shirkadda wiilasha Cupertino, Apple wuxuu go'aansaday inuu ka saaro dhammaan xayeysiinta barnaamijka Shazam dhammaan noocyadiisa.
Apple waxay la wareegtay xuquuqda Snoopy ee adeegga fidinta fiidiyaha ee soo socda
Iyadoo la fiirinayo adeegga fiidiyowga ee soo socda ee Apple, Cupertino waxay hadda heleen xuquuqda halyeeyada Snoopy iyo Carlitos.
Apple wuxuu ka saarayaa shaqada isku xidhka farshaxanada ku dhex jira Apple Music
Shabakadda bulshada ee ay Apple u diyaarisay farshaxanada iyada oo loo marayo Apple Music, Connect, lama sii heli karo dhammaan waxyaabaha illaa hadda la daabacayna waa laga saari doonaa 24-ka Maajo, 2019.
Tumblr ayaa dib ugu soo laabtay App Store
Apple Pay maahan mid ka walwalsan Yurub
Apple Pay, oo ah nidaamka lacag bixinta mobilada ee Apple, ayaa sahlanaansho dheeraad ah ku soo kordhisay iPhone-keena oo ay ...
Apple Music mar labaad saddex bilood oo bilaash ah (in kasta oo aad horeba ugu raaxaysatay muddadaas tijaabada ah)
Beta-kii ugu horreeyay ee iOS 12.1.2, watchOS 5.1.3 iyo tvOS 12.1.2 hadda waa la heli karaa
Beta-kii ugu horreeyay ee iOS 12.1.2, warchOS 5.1.3, iyo tvOS 12.1.2 ayaa hadda loo heli karaa bulshada soo-saareyaasha ah ee diiradda saaraya hagaajinta waxqabadka.
Maya, Apple kuma uusan hagaajin bug-ka-hadal-ka-hadalka watchOS 5.1.2
Apple waxay iibsatay shirkad A&R ah oo soo saarta hibooyinka muusikada cusub
Shirkadda Cupertino ee fadhigeedu yahay ayaa iibsatay shirkadda A&R ee Platoon, si ay u soo hesho hibooyin muusiko oo cusub oo loogu talagalay barnaamijkeeda muusikada.
Isticmaalaha Apple Watch wuxuu badbaadiyaa noloshiisa markii uu ogaado cilladda atrial fibrillation mahadnaqa ECG-da cusub
Saameynta ECG-da cusub ee Apple Watch Series 4 ay ku leedahay dadka isticmaala Mareykanka ayaa bilaabeysa in la ogaado: waxay horey u badbaadisay nolosha dadka qaar ...
Shaqada cusub ee ECG ee Apple Watch ayaa durba bilaabatay inay badbaadiso nolosha
Adeegsade Apple Watch ah ayaa laga yaabaa inuu badbaadiyey noloshiisa maxaa yeelay Apple Watch wuxuu ku ogaadey inuu qabo cillad aan caadi ahayn.
HomePod wuxuu imaan doonaa Shiinaha horraanta sanadka soo socda
Dalka xiga ee HomePod si rasmi ah loogu heli doono waa Shiinaha, wuxuuna sameyn doonaa horaanta sanadka soo socda.
Wax ka beddelka aagga Apple Watch kama hawlgeli doono ECG-da cusub meel ka baxsan Mareykanka
Kadib xanta ku saabsan waxyaabaha loo maro tuurista suurta galka ah ee ECG ee Apple Watch Series 4 waxaa la xaqiijiyay in aysan jirin wax macquul ah oo ka baxsan Mareykanka.
Calcbot for iOS waa la cusbooneysiiyay adoo ku soo noqonaya Apple Watch
Ragga ku jira Tapbots waxay cusbooneysiiyaan barnaamijka xisaabiyaha Calcbot iyagoo dib ugu soo celinaya Apple Watch ka dib imaatinka Apple Watch Series 4 cusub.
Sida loo helo ogeysiiska garaaca wadnaha ee ku jira Apple Watch
Sida loo helo ogeysiiska garaaca wadnaha ee ku saabsan Apple Watch-keena si ay u ogaato cillad aan caadi ahayn oo qalbigeenna ah
AirPod-yada cusub waxay noqon karaan kuwo siman oo leh dareemayaal caafimaad oo badan
Taxanaha Apple Watch 3 ayaa xukuma iibka sida ku cad IDC
Apple waxay daahfurtay dukaan gaar ah oo qiimo dhimis loogu sameeyay militariga iyo halyeeyada
Iyagoo raacaya raadadkii Apple Store of Education, wiilashii Cupertino waxay bilaabeen Dukaan Apple ah oo loogu talagalay millatariga Mareykanka iyo halyeeyadii.
Iska yaree isticmaalka batteriga ee Apple Watch inta aad tababbarayso
Ragga ka socda Cupertino waxay ka shaqeynayaan nooc ka mid ah Apple Music ee kiniiniyada ay maamusho Android, dhaqdhaqaaqa soo jiidanaysa dareenka sababo la xiriira tirada yar ee aaladaha noocaan ah ee laga helo suuqa.
Apple wali waxay xiiseyneysaa inay qayb ka hesho iHeartMedia
Apple waxay damacsan tahay inay maal gashato iHeartMedia si ay u balaariso tirada dadka isticmaala Apple Music ee Mareykanka
Apple Music wuxuu imanayaa Amazon Echo
Amazon ayaa kaliya ku dhawaaqday in aaladeeda caanka ah ee Echo ay ku raaxeysan doonto iswaafajinta Apple Music. Iswaafajintaan Apple Music…
Sida loo xakameeyo waqtiga ka soo kabashada ee Apple Watch
Beljim waxay horey u heysay macluumaad ku saabsan gaadiidka dadweynaha iyada oo loo marayo Khariidadaha Apple
Macluumaadka gaadiidka dadweynaha ee Khariidadaha Apple ayaa sidoo kale laga helay Belgium.
iTunes Connect ayaa xirmi doona laga bilaabo Disember 23 ilaa 27
Apple ayaa ka digtay in iTunes Connect uu xirmi doono laga bilaabo 23-ka ilaa 27-ka Diseembar
Shaqada ECG way dhowdahay, waxaa lagu hawlgelin doonaa daawada 5.1.2